ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ - Hello Sayarwon
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို အများစုကတော့ အပူပိုင်းဒေသနေရာများမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနေရာတွေကို ခရီးသွားလာနေတဲ့ ဧည့်သည်တွေကတော့ အဲ့လိုဒေသက ဒေသခံလူတွေလိုပဲ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်နိုင်ဖို့ အန္တရာယ်ညီတူညီမျှရှိပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာတွေကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အိန္ဒိယ,အမေရိက အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်း၊ ကာရေဘီယန်၊ အာဖရိက၊ ပစိဖိတ်ကျွန်းစွယ်များ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလေးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ပုံစံတူခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုး က သယ်ဆောင်ပြီး ရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။ အဲ့ခြင်အမျိုးအစားနာမည်များကတော့ Aedes aegypti and Aedes albopictus တို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားခြင်အမျိုးအစားတွေကို ညပိုင်းမှာ ကိုက်လေ့မရှိပဲ ဒီ ခြင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးက မနက်စောစောပိုင်းနဲ့ နေမဝင်ခင် ညနေစောင်းတို့မှာကိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
အခြေအနေတော်တော်များများမှာတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါရှိတဲ့ကလေးတွေက အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ တစ်ခုသို့မဟုတ် အဲ့ထက်ပိုပြီး ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းနဲ့ ကိုယ်တွေမှာကိုက်ခဲခြင်း(အထူးသဖြင့် အဆစ်အမြစ်နဲ့ ကြွက်သားတစ်ရှူးများ)
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ များသောအားဖြင့် ခြင်ကိုက်ပြီး ၄-၇ရက်အကြာမှာဖြစ်တတ်ပြီး ၇ရက်၁၀ရက်လောက်ကြာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ မရှိပါက ကလေးတွေမှာကတော့ လုံးဝပြန်ကောင်းတတ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကလူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကို မကူးစက်ပါဘူး။ ခြင်တွေကသာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို တစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ဆီကို သယ်ဆောင်ပြီးကူးစက်စေပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာများ
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကတော့ တအားမဆိုးပါက သေနိုင်ချေ မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်းကလေးတွေမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခံရှိထားရင် အရင်ဖြစ်ထားတာတွေရှိပါက ပြင်းထန်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါရဲ့ အန္တရာယ်တွေ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ပိုပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကတော့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးမှာ ပြင်းထန်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိပါက အနီးဆုံးဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းကို အမြန်ဆုံးခေါ်သွားပါ။
ပြင်းထန်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ပြင်းထန်စွာဗိုက်နာခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာပြသနာများ ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှုခက်ခဲခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံ ပညာရှင်များကတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးကို လုပ်ကြည့်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေကို သွေးလွန်တုပ်ကွေးအန္တရာယ်ကနေ လျှော့ချဖို့အတွက်ကတော့ ခြင်ကိုက်ခြင်းကနေ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လျှော့ချဖို့ ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကတော့ ကာကွယ်လို့ရမယ့်နည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးမွှားများ မလာစေတဲ့ ဆေးများအသုံးပြုခြင်း။ ကလေးတွေကတော့ DEET ကို ပုံမှန်အတိုင်း ၅၀%ပါတာကိုမသုံးပဲ ၁၅-၃၀% ပါတဲ့ဟာကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို ခြင်ထောင်အောက်မှာ သို့မဟုတ် လေအေးပေးစက် နဲ့ အိပ်စက်ခိုင်းပါ။
ရေစီးရေလာမကောင်းတဲ့ မြောင်းများ၊ချောင်းများ သို့မဟုတ် ငါးသားလောင်းလေးများပေါက်နိုင်တဲ့ ရေတွေကို ဖုံးကာထားခြင်းနဲ့ ခြင်များက သူတို့ဥတွေကို မဥအောင်ကာထားရပါမယ်။
လုံခြုံတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ပါ။ အရောင်တောက်တောက်ရှိတဲ့ အဝတ်အစား အရှည်တွေကို ဝတ်ပေးပါ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်သင့်ကလေးကို ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်းက ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တာတွေပေးတာအပြင် သင်က သင့်ကလေးနေမြန်မြန်ကောင်းနိုင်ဖို့အတွက်-
သင့်ကလေးကို ရေများများသောက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကိုကျွေးပေးပါ။
တစ်ချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ နာကျင်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါက ကလေးတွေကို အဖျားကျအောင် အနာသက်သာစေဖို့ အနာသက်သာဆေးလေးတွေပေးလို့ရပါတယ်။သို့သော်လည်း သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ aspirin ,ibuprofen အသုံးပြုမှုကိုတော့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
Dengue. http://www.nhs.uk/conditions/Dengue/Pages/Introduction.aspx#prevention. Accessed December 6, 2016.